ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ကိုဗစ်-၁၉ အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင် (ICU) မှာ ကိုဗစ် လူနာတဦးကို ကုသပေးနေတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ။ (ဓာတ်ပုံ - Ministry of Health and Sports, Myanmar - နိုဝင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၂၀)
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်ရောဂါ ဓါတ်ခွဲနမူနာယူစစ်ဆေးတွေ့ရှိသူ တသိန်းကျော်သွားပြီမို့၊ ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုတွေကို အခုထက် ပိုမိုတိုး-လုပ်သွားဖို့ လိုတယ်လို့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတချို့က မြင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း သံသယလူနာတွေထဲက ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ပြီး နေ့စဉ်လိုလို ဓါတ်ခွဲနမူနာစုစုပေါင်း တသောင်း အထက်ကို စစ်ဆေးပေးနေတယ်လို့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရက ပြောပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ် ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုတွေ ဘယ်လိုအခြေအနေရှိနေသလဲ။ ဘယ်လိုမူဝါဒတွေနဲ့ ဦးစားပေး သတ်မှတ်စစ်ဆေးနေလဲဆိုတာ ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်းသတင်းထောက် မဆုမွန်က စုံစမ်းမေးမြန်းထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာ ကိုဗစ်သံသယရှိသူပေါင်း ၁သန်းကျော်ကို ဓါတ်ခွဲနမူနာယူစစ်ဆေးမှုလုပ်ခဲ့ပြီး၊ ရောဂါပိုးရှိတယ်လို့ ဓါတ်ခွဲအတည်ပြုနိုင်သူကတော့ ၁သိန်း ၁သောင်းကျော်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဌာန၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဓာတ်ခွဲမှုဌာနတွေနဲ့ တပ်မတော်ဆေးရုံကြီးတွေ အပါအဝင် ပြည်နယ်တိုင်းဆေးရုံကြီးတွေက ဓာတ်ခွဲခန်းတွေကနေ နေ့စဉ်လို စစ်ဆေးမှုတွေကနေ ကိုဗစ်ရောဂါရှိသူတွေကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်နေပါတယ်လို့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန တာဝန်ရှိသူက ပြောပါတယ်။ အဓိကကတော့ ပြည်ပကပြန်လာသူ၊ ပြည်တွင်းခရီးသွားရာဇဝင်ရှိသူတွေနဲ့ ရောဂါလက္ခဏာ သံသယရှိသူတွေကို ဦးစားပေးစစ်ဆေးပေးနေပါတယ်လို့ ကျန်းမာရေးနဲ့ အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒေါက်တာသန်းနိုင်စိုးက ဗွီအိုအေကိုပြောပါတယ်။
" Test ကတော့ ကျနော်တို့ အစပိုင်းတုန်းကတော့ နိုင်ငံခြားကနေ ဝင်ရောက်လာတဲ့သူတွေပေါ့နော်။ နိုင်ငံခြားက ဝင်လာသူတိုင်း အခုထိလည်း ကွာရမ်တင်းဝင်နေရတုန်းပါပဲ။ ကွာရမ်တင်းထဲ ဝင်ရောက်သူတိုင်း ပြည်တွင်း ပြည်ပရှိပါမယ် အဲ့ဒီ့လူတွေကို Test စစ်ပါတယ်။ နံပတ်(၂)ကတော့Contact ကွာရမ်တင်းပေါ့။ အရမ်း နီးကပ်ခဲ့တဲ့ သူတွေပေါ့ Primary Contact အရမ်းဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတွေ။ ပြီးတဲ့အခါကျတော့ သူ့မှာ ရောဂါလက္ခဏာ တခုခုပြင်းထန်စွာခံစားနေရတဲ့သူတွေ အဲ့ဒီ့လူတွေကို ကွန်ဖမ်းလုပ်ပါတယ်။ အတည်ပြုစစ်ပါတယ်။ သံသယလူနာတွေ Suspect Cases တွေပေါ့။ ပြီးတဲ့အခါကျရင် စပါယ်ရှယ်ပေါ့ စပါယ်ရှယ်စစ်တာရှိပါတယ်။ ဥပမာ-ကုန်ကားဒရိုင်ဘာတို့လို နောက် ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက အထူးရဲတို့လိုပေါ့ ဒါမျိုးတွေကို ကျနော်တို့ စစ်ပေးတဲ့ဟာရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီ့တော့ အဓိကအုပ်စုက ၄အုပ်စုလောက်ရှိပါတယ်။ ခရီးသွားကွာရမ်တင်းရယ် Contact ရယ် PUI (Person under investigation ) ရယ် နောက်စပါယ်ရှယ်ကေ့စ်တွေရယ်ပေါ့။ စစ်ဆေးတာကို အဓိက တာဝန်ခံရတဲ့ ဌာနကတော့ အဲ့တာအမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနပေါ့နော်။ သူနဲ့အလားတူကတော့ ဆေးသုတေသန ဦးစားဌာနကတော့ ဦးစီးဌာနကြီးအနေနဲ့ပါ။ အဓိကကတော့ အဲ့ဒီ့ဌာနကြီး ၂ခုက ဦးဆောင်ပါတယ်။ "
လက်ရှိအားဖြင့်တော့ ကိုဗစ်ရောဂါပိုး ဓါတ်ခွဲအတည်ပြု တွေ့ရှိသူနဲ့ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခဲ့သူတွေ ရောဂါပိုး လက္ခဏာပြသူတွေကို အသွားအလာကန့်သတ်မှုတွေလုပ်တာ၊ သီးခြားခွဲထားတာတွေလုပ်ဆောင်နေချိန်မှာပဲ၊ ဆေးရုံဆေးခန်းတွေ ကွာရမ်တင်းစင်တာတွေမှာ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းမလုံလောက်မှုတွေနဲ့ နေရာချထားရေး အခက်အခဲတွေ ရှိနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမှာ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်က စစ်သင့်တဲ့ပြည်သူတိုင်းကို အပြည့်အဝ စစ်ပေးနိုင်ခြေရှိနေပါသလား ဆိုတာကိုလည်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရ ဒေါက်တာသန်းနိုင်စိုးက ရှင်းပြပါတယ်။
" ကျနော်တို့နေ့စဉ်စစ်နေတာ သောင်းနဲ့ချီပါတယ်ခင်ဗျ။ တချို့ရက်တွေဆို တသောင်းရှစ်ထောင် တသောင်း ကိုးထောင် အဲ့ဒီ့မှာ Positivity Rate ကလည်း ၅% ၆% ၇% ပေါ့ အခုရက်တွေဆို ၆% ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပေါ့ ဒီလောက်စစ်နေတာကို ဒီလောက်ပဲပေါ်တယ်ဆိုတာက ကျနော်တို့ဘက်က စစ်နိုင်တဲ့ Capacity ကို အပြည့်အဝ သုံးပြီး စစ်ပေးနေတယ်ဆိုတာကိုတော့ ဒါကိုတော့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ကျနော်တို့ Transparently ပြောလို့ရပါတယ်။ ခုနကလို လူတွေကတော့ အမျိုးမျိုးပြောကြတာပေါ့ဗျာ ကျနော်တို့ ဘယ်လောက်ပဲလုပ်လုပ် အကောင်းပြော မခံရတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ရမှာကတော့ နံပတ်တစ်ကတော့ ပြည်သူတွေပေါ့ လိုက်နာတဲ့ပြည်သူတွေ အများကြီးရှိတယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့က ငြင်းလို့မရပါဘူး။ တဘက်ကလည်း ဒီရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်လုပ်ငန်းတွေမှာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးနေကြတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ နှီးနွယ်ဝန်ကြီးဌာနဝန်ထမ်းတွေ စေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေ အလှူရှင်တွေ အများကြီးပါပဲ ဒီလူတွေကိုလည်း ကျနော်တို့က ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ စနစ်တကျနဲ့ လူတွေက သတိလေးထားပြီး လိုက်နာပေးကြမယ်ဆိုရင် ဆက်ပြီးတင်းခံနေတဲ့ နေ့စဉ်တွေ့ရှိမှု တထောင်ဝန်းကျင်ဂဏန်းကနေ ဦးကျိုးကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ "
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ပိုးရှိ-မရှိ လူထုကြား အခုလက်ရှိစစ်ပေးနေတာနဲ့ စာရင် ဒီ့ထက်ပိုပြီး စစ်ဆေးဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်လို့လည်း ဖျားနာကုဆေးခန်း ရန်ကုန်ကွန်ရက်ရဲ့ တာဝန်ခံ ဒေါက်တာကျော်မင်းထွန်း ကပြောပါတယ်။
" တကယ်တမ်းက ကျနော့်အမြင်ပေါ့လေ စစ်တာက သိပ်မလုံလောက်သေးဘူး။ တချို့ကျတော့ စစ်ချင်တယ် သိချင်တယ် စစ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ် အများကြီးပဲ။ အခုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ Private တွေကို ခွင့်မပြုတော့ စစ်လို့မရဘူးပေါ့နော်။ ကျနော်တို့ Fever Clinic အနေနဲ့ တင်မယ်ဆိုလည်း ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆို စစ်လို့မရဘူး အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်။ အခုက များများတိုး-စစ်ဖို့လိုတယ် များများတိုးစစ်မှ လူနာများများတွေ့မှာ လူနာတွေအတွက် Manage စောစောစီးစီး လုပ်လို့ရမှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မလုံမခြုံဖြစ်တဲ့သူတွေလည်း အများကြီးပဲ။ စစ်ချင်တဲ့သူတွေကို ပေးစစ်လိုက်၊ စစ်ခွင့်ပေးလိုက်ပေါ့. ပြီးတော့ မိုဘိုင်းလ် Team ဖွြဲ့ပီး များများစစ်လိုက်ရင် များများ ထွက်လာမယ်ပေါ့နော်။ အခုက System ပြောင်းဖို့လိုနေပြီ။ Containment System ပြောင်းဖို့လိုနေပြီ။ Home Q System တွေ ပြောင်းဖို့လိုနေပြီ များသောအားဖြင့် စင်တာတွေမသွားလိုကြဘူး။ အိမ်မှာပဲနေမယ် စစ်ချင်တယ် သိချင်တယ် အဲ့လိုလူနာတွေများလာတယ် နောက်ပိုင်း။ အခု ကျနော့်အမြင်ကတော့ များများစစ် များများတွေ့ နောက်ဆုံး Q ပေါ်လစီပြောင်းပေါ့နော် အဲ့လိုလေးတွေ ခွဲဖို့လိုအပ်လာပြီ များများစစ်ဖို့လိုအပ်နေပြီပေါ့။"
လက်ရှိမှာတော့ ပြည်သူတိုင်း ကိုဗစ်၁၉ ကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်ရေးအစီအမံတွေကိုလည်း အခုလက်ရှိ ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာနက မူဝါဒချမှတ် ကြိုတင်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေပါတယ်လို့လည်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရကပြောပါတယ်။
အခုလက်ရှိမှာတော့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု John Hopkins ဆေးတက္ကသိုလ်ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံဟာ တကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ ကိုဗစ်၁၉ ကူးစက်မှုအများဆုံးနိုင်ငံအဆင့် ၆၉နေရာမှာ တည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ရက်နေ့ ည ၈နာရီသတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ ၂၄နာရီအတွင်း ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုပေါင်း (၂၃,၈၇၄ ခု)- ကနေ (၂,၃၁၉ဦး) အထိ ရောဂါပိုးတွေ့ရှိလို့ အခုဆိုရင်တော့ တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ ရောဂါကူးစက်သူပေါင်း ( ၁၁၀,၆၆၇) တသိန်းတသောင်းကျော်အထိ ကူးစက်ခံနေရပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
မွနျမာနိုငျငံမှာ ကိုဗဈရောဂါ ဓါတျခှဲနမူနာယူစဈဆေးတှရှေိ့သူ တသိနျးကြျောသှားပွီမို့၊ ဓါတျခှဲစဈဆေးမှုတှကေို အခုထကျ ပိုမိုတိုး-လုပျသှားဖို့ လိုတယျလို့ ကနျြးမာရေးဝနျထမျးတခြို့က မွငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး သံသယလူနာတှထေဲက ဦးစားပေးအဆငျ့သတျမှတျပွီး နစေ့ဉျလိုလို ဓါတျခှဲနမူနာစုစုပေါငျး တသောငျး အထကျကို စဈဆေးပေးနတေယျလို့ ကနျြးမာရေးဝနျကွီးဌာန ပွောခှငျ့ရက ပွောပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျ ဓါတျခှဲစဈဆေးမှုတှေ ဘယျလိုအခွအေနရှေိနသေလဲ။ ဘယျလိုမူဝါဒတှနေဲ့ ဦးစားပေး သတျမှတျစဈဆေးနလေဲဆိုတာ ဗှီအိုအမွေနျမာပိုငျးသတငျးထောကျ မဆုမှနျက စုံစမျးမေးမွနျးထားပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံတဝနျးလုံးမှာ ကိုဗဈသံသယရှိသူပေါငျး ၁သနျးကြျောကို ဓါတျခှဲနမူနာယူစဈဆေးမှုလုပျခဲ့ပွီး၊ ရောဂါပိုးရှိတယျလို့ ဓါတျခှဲအတညျပွုနိုငျသူကတော့ ၁သိနျး ၁သောငျးကြျောသှားပွီဖွဈပါတယျ။ အမြိုးသားကနျြးမာရေးဆိုငျရာဌာန၊ ဆေးသုတသေနဦးစီးဌာန၊ ပွညျသူ့ကနျြးမာရေးဆိုငျရာဓာတျခှဲမှုဌာနတှနေဲ့ တပျမတျောဆေးရုံကွီးတှေ အပါအဝငျ ပွညျနယျတိုငျးဆေးရုံကွီးတှကေ ဓာတျခှဲခနျးတှကေနေ နစေ့ဉျလို စဈဆေးမှုတှကေနေ ကိုဗဈရောဂါရှိသူတှကေို ရှာဖှဖေျောထုတျနပေါတယျလို့ ကနျြးမာရေးဝနျကွီးဌာန တာဝနျရှိသူက ပွောပါတယျ။ အဓိကကတော့ ပွညျပကပွနျလာသူ၊ ပွညျတှငျးခရီးသှားရာဇဝငျရှိသူတှနေဲ့ ရောဂါလက်ခဏာ သံသယရှိသူတှကေို ဦးစားပေးစဈဆေးပေးနပေါတယျလို့ ကနျြးမာရေးနဲ့ အားကစားဝနျကွီးဌာန ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဒေါကျတာသနျးနိုငျစိုးက ဗှီအိုအကေိုပွောပါတယျ။
" Test ကတော့ ကနြျောတို့ အစပိုငျးတုနျးကတော့ နိုငျငံခွားကနေ ဝငျရောကျလာတဲ့သူတှပေေါ့နျော။ နိုငျငံခွားက ဝငျလာသူတိုငျး အခုထိလညျး ကှာရမျတငျးဝငျနရေတုနျးပါပဲ။ ကှာရမျတငျးထဲ ဝငျရောကျသူတိုငျး ပွညျတှငျး ပွညျပရှိပါမယျ အဲ့ဒီ့လူတှကေို Test စဈပါတယျ။ နံပတျ(၂)ကတော့Contact ကှာရမျတငျးပေါ့။ အရမျး နီးကပျခဲ့တဲ့ သူတှပေေါ့ Primary Contact အရမျးဖွဈခဲ့တဲ့သူတှေ။ ပွီးတဲ့အခါကတြော့ သူ့မှာ ရောဂါလက်ခဏာ တခုခုပွငျးထနျစှာခံစားနရေတဲ့သူတှေ အဲ့ဒီ့လူတှကေို ကှနျဖမျးလုပျပါတယျ။ အတညျပွုစဈပါတယျ။ သံသယလူနာတှေ Suspect Cases တှပေေါ့။ ပွီးတဲ့အခါကရြငျ စပါယျရှယျပေါ့ စပါယျရှယျစဈတာရှိပါတယျ။ ဥပမာ-ကုနျကားဒရိုငျဘာတို့လို နောကျ ရှေးကောကျပှဲတုနျးက အထူးရဲတို့လိုပေါ့ ဒါမြိုးတှကေို ကနြျောတို့ စဈပေးတဲ့ဟာရှိပါတယျ။ အဲ့ဒီ့တော့ အဓိကအုပျစုက ၄အုပျစုလောကျရှိပါတယျ။ ခရီးသှားကှာရမျတငျးရယျ Contact ရယျ PUI (Person under investigation ) ရယျ နောကျစပါယျရှယျကစျေ့တှရေယျပေါ့။ စဈဆေးတာကို အဓိက တာဝနျခံရတဲ့ ဌာနကတော့ အဲ့တာအမြိုးသားကနျြးမာရေးဓာတျခှဲမှုဆိုငျရာဌာနပေါ့နျော။ သူနဲ့အလားတူကတော့ ဆေးသုတသေန ဦးစားဌာနကတော့ ဦးစီးဌာနကွီးအနနေဲ့ပါ။ အဓိကကတော့ အဲ့ဒီ့ဌာနကွီး ၂ခုက ဦးဆောငျပါတယျ။ "
လကျရှိအားဖွငျ့တော့ ကိုဗဈရောဂါပိုး ဓါတျခှဲအတညျပွု တှရှေိ့သူနဲ့ တိုကျရိုကျထိတှခေဲ့သူတှေ ရောဂါပိုး လက်ခဏာပွသူတှကေို အသှားအလာကနျ့သတျမှုတှလေုပျတာ၊ သီးခွားခှဲထားတာတှလေုပျဆောငျနခြေိနျမှာပဲ၊ ဆေးရုံဆေးခနျးတှေ ကှာရမျတငျးစငျတာတှမှော ကနျြးမာရေးဝနျထမျးမလုံလောကျမှုတှနေဲ့ နရောခထြားရေး အခကျအခဲတှေ ရှိနတေယျလို့ သိရပါတယျ။ ဒီလိုအခွအေနမှော ကနျြးမာရေးဝနျကွီးဌာနဘကျက စဈသငျ့တဲ့ပွညျသူတိုငျးကို အပွညျ့အဝ စဈပေးနိုငျခွရှေိနပေါသလား ဆိုတာကိုလညျး ကနျြးမာရေးဝနျကွီးဌာန ပွောခှငျ့ရ ဒေါကျတာသနျးနိုငျစိုးက ရှငျးပွပါတယျ။
" ကနြျောတို့နစေ့ဉျစဈနတော သောငျးနဲ့ခြီပါတယျခငျဗြ။ တခြို့ရကျတှဆေို တသောငျးရှဈထောငျ တသောငျး ကိုးထောငျ အဲ့ဒီ့မှာ Positivity Rate ကလညျး ၅% ၆% ၇% ပေါ့ အခုရကျတှဆေို ၆% ပတျဝနျးကငျြလောကျပေါ့ ဒီလောကျစဈနတောကို ဒီလောကျပဲပျေါတယျဆိုတာက ကနြျောတို့ဘကျက စဈနိုငျတဲ့ Capacity ကို အပွညျ့အဝ သုံးပွီး စဈပေးနတေယျဆိုတာကိုတော့ ဒါကိုတော့ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ကနြျောတို့ Transparently ပွောလို့ရပါတယျ။ ခုနကလို လူတှကေတော့ အမြိုးမြိုးပွောကွတာပေါ့ဗြာ ကနြျောတို့ ဘယျလောကျပဲလုပျလုပျ အကောငျးပွော မခံရတာတှလေညျးရှိပါတယျ။ ကြေးဇူးတငျရမှာကတော့ နံပတျတဈကတော့ ပွညျသူတှပေေါ့ လိုကျနာတဲ့ပွညျသူတှေ အမြားကွီးရှိတယျဆိုတာ ကနြျောတို့က ငွငျးလို့မရပါဘူး။ တဘကျကလညျး ဒီရောဂါ ကာကှယျထိနျးခြုပျလုပျငနျးတှမှော ပါဝငျဆောငျရှကျပေးနကွေတဲ့ ကနျြးမာရေးဝနျထမျးတှေ နှီးနှယျဝနျကွီးဌာနဝနျထမျးတှေ စတေနာ့ဝနျထမျးတှေ အလှူရှငျတှေ အမြားကွီးပါပဲ ဒီလူတှကေိုလညျး ကနြျောတို့က ကြေးဇူးအမြားကွီးတငျပါတယျ။ စနဈတကနြဲ့ လူတှကေ သတိလေးထားပွီး လိုကျနာပေးကွမယျဆိုရငျ ဆကျပွီးတငျးခံနတေဲ့ နစေ့ဉျတှရှေိ့မှု တထောငျဝနျးကငျြဂဏနျးကနေ ဦးကြိုးကသြှားမှာဖွဈပါတယျ။ "
ကနျြးမာရေးဝနျကွီးဌာနက ပိုးရှိ-မရှိ လူထုကွား အခုလကျရှိစဈပေးနတောနဲ့ စာရငျ ဒီ့ထကျပိုပွီး စဈဆေးဖို့ လိုအပျနပေါတယျလို့လညျး ဖြားနာကုဆေးခနျး ရနျကုနျကှနျရကျရဲ့ တာဝနျခံ ဒေါကျတာကြျောမငျးထှနျး ကပွောပါတယျ။
" တကယျတမျးက ကနြေျာ့အမွငျပေါ့လေ စဈတာက သိပျမလုံလောကျသေးဘူး။ တခြို့ကတြော့ စဈခငျြတယျ သိခငျြတယျ စဈလို့မရဘူးဖွဈနတေယျ အမြားကွီးပဲ။ အခုကဘာဖွဈလဲဆိုတော့ Private တှကေို ခှငျ့မပွုတော့ စဈလို့မရဘူးပေါ့နျော။ ကနြျောတို့ Fever Clinic အနနေဲ့ တငျမယျဆိုလညျး ဘာမှမဖွဈဘူးဆို စဈလို့မရဘူး အဲ့လိုဖွဈနတေယျ။ အခုက မြားမြားတိုး-စဈဖို့လိုတယျ မြားမြားတိုးစဈမှ လူနာမြားမြားတှမှေ့ာ လူနာတှအေတှကျ Manage စောစောစီးစီး လုပျလို့ရမှာ ကိုယျ့ကိုကိုယျ မလုံမခွုံဖွဈတဲ့သူတှလေညျး အမြားကွီးပဲ။ စဈခငျြတဲ့သူတှကေို ပေးစဈလိုကျ၊ စဈခှငျ့ပေးလိုကျပေါ့. ပွီးတော့ မိုဘိုငျးလျ Team ဖှွဲ့ပီး မြားမြားစဈလိုကျရငျ မြားမြား ထှကျလာမယျပေါ့နျော။ အခုက System ပွောငျးဖို့လိုနပွေီ။ Containment System ပွောငျးဖို့လိုနပွေီ။ Home Q System တှေ ပွောငျးဖို့လိုနပွေီ မြားသောအားဖွငျ့ စငျတာတှမေသှားလိုကွဘူး။ အိမျမှာပဲနမေယျ စဈခငျြတယျ သိခငျြတယျ အဲ့လိုလူနာတှမြေားလာတယျ နောကျပိုငျး။ အခု ကနြေျာ့အမွငျကတော့ မြားမြားစဈ မြားမြားတှေ့ နောကျဆုံး Q ပျေါလစီပွောငျးပေါ့နျော အဲ့လိုလေးတှေ ခှဲဖို့လိုအပျလာပွီ မြားမြားစဈဖို့လိုအပျနပွေီပေါ့။"
လကျရှိမှာတော့ ပွညျသူတိုငျး ကိုဗဈ၁၉ ကာကှယျဆေးထိုးနိုငျရေးအစီအမံတှကေိုလညျး အခုလကျရှိ ကနျြးမာရေး ဝနျကွီးဌာနက မူဝါဒခမြှတျ ကွိုတငျအကောငျအထညျဖျော ဆောငျရှကျနပေါတယျလို့လညျး ကနျြးမာရေးဝနျကွီးဌာနပွောခှငျ့ရကပွောပါတယျ။
အခုလကျရှိမှာတော့ အမရေိကနျပွညျထောငျစု John Hopkins ဆေးတက်ကသိုလျရဲ့ ထုတျပွနျခကျြအရ မွနျမာနိုငျငံဟာ တကမ်ဘာလုံးအတိုငျးအတာနဲ့ ကိုဗဈ၁၉ ကူးစကျမှုအမြားဆုံးနိုငျငံအဆငျ့ ၆၉နရောမှာ တညျရှိနတောဖွဈပါတယျ။ ဒီဇငျဘာလ ၁၅ရကျနေ့ ည ၈နာရီသတငျးထုတျပွနျခကျြအရ ၂၄နာရီအတှငျး ဓာတျခှဲစဈဆေးမှုပေါငျး (၂၃,၈၇၄ ခု)- ကနေ (၂,၃၁၉ဦး) အထိ ရောဂါပိုးတှရှေိ့လို့ အခုဆိုရငျတော့ တနိုငျငံလုံးအတိုငျးအတာနဲ့ ရောဂါကူးစကျသူပေါငျး ( ၁၁၀,၆၆၇) တသိနျးတသောငျးကြျောအထိ ကူးစကျခံနရေပွီဖွဈပါတယျရှငျ။